masuuliyadda shakhsiga | Flammor - profetisk tidskrift
Marka ay timaado in la badbaadiyey for daa'in, waa qofka mas'uul ka ah si loo hubiyo in aad hesho.
In siyaabo kala duwan, waxa ay u muuqataa in dad badan oo waxaad dhali doontaa magaca Christian ma ku nool yihiin meel ku guuleystay. Waxay ku nool yihiin halkii in noocyo kala duwan oo soo gaartay.
isticmaalka qaar ka mid ah been uu hadalka iyo evasions, waxaa loola jeedaa in aad nuurka runta ka tagay oo ku nool baynamutaan ah ee nolosha iyo maskaxdaada. Tani waa mid aad u halis ah. Marka Xaqiiqooyinka kitaabiga ah oo kala duwan kala kulmaan qofka noocan oo kale ah, waxaa laga yaabaa inay ku adag tahay inay haleelaan fariinta oo toobad keen, waayo, been ayaa qayb ka mid ah nolol maalmeedka noqday.
Qaar ka mid ah xitaa isticmaali leexin! Runtii waa waqti ay ku Caabudayn gudcur Mater aan bilaabin inay Rabbiga ammaanaan. "Waa maxay wadnaha waxaa ka buuxa afku wuxuu ku hadlaa." Luukos. 6:45
Sidoo kale waa waqti si loo hubiyo in xiriir la dhiso, ka saar la nacaybka iyo lovelessness! "Haddii qof ayaa sheegay in uu jecel yahay Ilaah, laakiin uu walaalkiis neceb yahay, waa beenaaleh. Qof kasta oo aanu walaalkii uu uu arkay aan jeclahay, oo aan u jeclaan karaa Ilaaha uusan arag. "1 John. 4:20.
Sidoo kale waa wakhti ay ku soo iibsataa wax dambi dhaaf iyo joojin ku nool qadhaadh: ". Waayo, haddaad dadka u cafidaan xumaantooda, Aabbihiinna jannada ku jira ayaa idin cafiyi doona" Matt. 6:14.
In gudbikaraa oo moral, dad badan ayaa la siiyey ilaa jidka bulshada ee nolosha, si ay ugu noolaadaan xiriirka guur ka hor iyo wada-noolaanshaha, sida dadka kale sameeyaan.
Waa waqti hadda in ay ku riday in la joojiyo dhaqanka sida iyo gashaday dharkii xaqnimada. Just, sababtoo ah bulshada aqbalay sidan nolosha ayaa ereygii Ilaah ma beddelmin. dhamaadka geliya in hadda iyo qiran dembiga iyo hadda wax laga beddelo hab-nololeedka ah unbiblical! Tani ma aha waarta!
Waxaan u baahanahay dib u soo celinta ah ee anshaxa. Waxaa jira kuwa la galida lulataaye ku nool oo qayb ka ah naftiisa. Waxaa la joogaa waqtigii this jebin, waxaa sumcadda nolosha iyo hoos nolosha ruuxiga ah ee khatar degdeg ah.
Waxaa jira waqti la lumiyo, waayo, kuwa doonaya in ay noqon in aroosadda badnaa Masiix. qiimaha No ma aha mid aad u sareeya in ay bixiyaan in lagu daro.
Wax alla wixii aad hagaajin iyo tagaan hab nololeed cusub, ka dibna qirtaan wixii aad ku samaysay dembi ka hor iyo ma beddeli kaliya xiriirka. Ty. "Haddii dembiyadeenna qiranno, isagu waa aamin iyo caaddil inuu dembiyadeenna inaga cafiyo, oo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan." 1 Yooxanaa. 1: 9.
Waxaan qori maayo inaan xukumo, laakiin si aad u badbaadiso iyo daryeelka kuwa iman qalad ah. Waxaan rabnaa in aan idhaahdo, waxaa had iyo jeer waa hab soo baxay kuwa doonaya in ay ku noolaadaan, waayo, Ilaah xaqnimo, ka dooni xagga Eebe, joojiyo samaynta marmarsiiyo waayo, ma ay samaynayaan! Baridid ​​Ciise - waxa uu doonayaa in la xoreeyo oo isla daahiri!
Waxaa la joogaa waqtigii toobadda, waqtiga inta hadhay waxay noqon kartaa mid aad u gaaban, aan ka helnay digniino dheeraad ah in Sweden loo muquurtay karo dagaal. Markaas waxaad u leedahay in diyaar u ah inay tagaan dunida weligeed galay ahaan. Markaas waxaa laga yaabaa in aad u soo daahay in ay jeer oo musiiba ah si uu naftiisa u saxo. Haatan badbaadada iyo diinta. Ka faa'iidayso waxaa ka mid ah!